Shiinuhu Gaadhi-hoosaadka Qalabka Spare Parts Warshada iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yingming
1.We isticmaal birta heerka sare ah ee kabaha track our.Adaggu waa qiyaastii 43-47 RC.
2. Tayada birta iyo habka adkeynta ayaa dammaanad u ah caabbinta xirashada sare.
3. Si loo hubiyo tayada iyo si loo hubiyo dulqaadka loo baahan yahay, waxaanu samaynaa tijaabo adag oo ku saabsan alaabta warshadda.
4. Ballaca kabaha tracker our excavator waa laga bilaabo 220 mm ilaa 800 mm iyo bulldozer ka 560 mm ilaa 915 mm.
5. Waxaan ku siin karnaa kabo-socod Single-grouser-ka ah oo loogu talagalay cagaf-cagafayaasha, kabo laba-jibbaaran oo laba-jibbaaran oo loogu talagalay mashiinnada culus ama kuwa xamuulka qaada iyo kabo raad-raac ah oo jeexan oo loogu talagalay qodista.
Magaca Qaybaha: Kabaha raadraaca cagaf-cagafayaasha
Adag-la'aanta: HRC43-47 qoto dheer 4-6mm;
Midabada: Sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha;
Farsamo: Been abuurasho, shubid, daawaynta kuleyliyaha;
Adkeydka dusha sare: HRC53-56, qoto dheer: 7mm-10mm;
Waqtiga dammaanadda: 2000 saacadood;
Xidhmada: Fumigate baakad ku habboon badda
Kabaha orodka waxaa loo isticmaali karaa qayb ka mid ah iibinta ka dib inta badan calaamada caanka ah ee qodista iyo cagafyada sida KOMATSU, CATERPILLAR, HITACHI, KOBELCO, SUMITOMO, KATO, HYUNDAI, DAEWOO, DOOSAN, JCB, SHANTUI iwm.
Komatsu (PC40-7 PC60-5-6-7 PC75 PC100-3-5 PC120-5 PC130 PC200-2-3-4-5-6-7-8 PC220-1-3-5 PC230 PC240 PC300-1- 5-6-7 PC400-1-3-5)
Hitachi (EX40 EX55 ZX55 EX55-5B EX60-2-3 EX70(ZX70) EX100M EX100-1-2-3-5 EX120 EX150 EX160 EX200-1-2-3-5 ZX200 ZX20X-210 -5 EX330 EX400 UH08 UH07 UH10 UH14)
Sumitomo (SH60 SH65 SH100 SH120-A3 SH120 SH200 SH220-1-5 SH260 ​​SH280 SH300-1-2-3 SH340 SH580-5 S25 S35 S120 S160 S250 S260 S265F2 S280S8FA
Hore: Qaybaha Gaariga Hoostiisa ee Bulldozer Excavator Raad Hagaaji Golaha Silinder
Xiga: Gaadhi-hoosaadka Spare Parts Ilaalada Raadraaca Xidhiidhka Ilaalada ee Qodayaasha & Cagafleyda
Silsilad La Soco Kabaha Raadka
Lasoco Xiriirinta Kabaha
Raadraaca suufka Qodista Birta ee Kabaha Track-ga
Qufulka Hoose Roller Track Roller ee loogu talagalay E320;...